China B UFO Light ifektri abakhiqizi | Liper
Ukukhanya kwe-LED ophahleni
Usayizi wamahhala we-EC Down Light
Ukuthengisa Okushisayo BS Floodlight
Ukuthengisa Okuhamba phambili kwe-Solar Floodlight
B UFO Khanyisa
I-IP65 Down Light Generation II
Ncoma kakhulu i-C Street Light
I-CE CB RoHS
Imodeli Amandla I-Lumen I-DIM Usayizi womkhiqizo
Ingxenye #: LPUF-100B01 100W 8750-8970LM N ∅265x130mm
Ingxenye #: LPUF-200B01 200W 18380-18650LM N ∅375x125mm
I-High bay light isetshenziswa kakhulu ezinkundleni zemidlalo, ezitolo, endaweni yokugcina izimpahla nasezindaweni zezimboni. Zonke lezi zindawo zinesici esivamile: Uphahla luphezulu kakhulu, akulula ukulifaka noma ukukufaka esikhundleni salo. Uma ufuna ukufaka noma ukufaka okunye ukukhanyisa kwezimboni, kuza umbuzo obaluleke kakhulu: Ungayikhetha kanjani i-Led Light bay Light enhle?
Ukuqina, ukusebenza kahle kwamandla, ukuklama okuhle, ukukhanya, kubiza zonke lezi zinto ozozicabangela.
Ama-Lipper IP65 UFOs angakunika isisombululo esihle sokukhanyisa ezimbonini ukuhlangabezana nazo zonke lezi zidingo.
Idizayini enelungelo lobunikazi—Isimo se-UFO sokupholisa konke konke kumklamo owodwa, olula futhi omuhle, uhlukile kakhulu emakethe. Imodi yangasese, awukwazi ukuthola okufanayo emakethe.
Ukuqina—I-die casting aluminium sink yokushisa ngamaphiko okupholisa iqinisekisa ukushabalalisa okuhle kokushisa. Lapho wenza isivivinyo sokuguga sokushisa okuphezulu, senza nokuthola ukushisa kwengxenye ebalulekile yesibani, njenge-chip eholelwe, i-inductance, i-mosfet, umzimba wesibani. Izibani ze-Lipper LED UFO zinokumboza okuhle kokulwa nokugqwala okungadlula ukuhlolwa kwamafutha okusawoti amahora angama-24. Ukushisa kokukhanya okulawulwa kahle kanye nomdwebo wokulwa nokugqwala kuqinisekisa ubude besikhathi sokuphila (30000 Hrs.).
Ukusebenza kahle kwamandla nokukhanya—Izinhlobo ze-100W ne-200W ziyatholakala. Lezi zibani zisebenza ngokusebenza kwamandla ka-100lm / w ngokusho kwedatha yokuhlola egumbini lethu elimnyama. Ukuqhathanisa nokukhanya kwendabuko endala kungonga amandla kuze kufike ku-70%.
Ukuvikelwa kwe-IP—Izibani zethu eziholelekile ze-UFO zingafinyelela ku-IP65 ezivivinywa ngumshini wokuhlola ongenawo amanzi ngaphansi kwesimo esishisayo amahora angama-24.
Umphumela Wokukhanya—I-CRI ephezulu ne-R9> 0 (evivinywa ngokuhlanganisa indawo) ingenza isihloko esingaphansi kokukhanya sigqame kakhulu futhi sibonise umbala weqiniso. Ngalesi sici, ama-Lipper UFOs angasebenzisa esitolo, indawo yokudlela ukusiza ukukhombisa ukuthi izimpahla ziheha ngokwengeziwe.
Futhi akupheleli lapho! Ama-Lipper UFOs yi-CE ne-Rosh-aqinisekisiwe futhi eza newaranti yeminyaka emithathu. Kulula ukuphatha, ukufaka nokugcina. Siphinde sinikeze ngefayela le-IES kumakhasimende enza iphrojekthi ukuze ukwazi ukulingisa indawo yokukhanyisa yangempela yephrojekthi.
Langaphambilini Isibani se-E Backlit
Olandelayo: I-Angle Adjustable E Track Light
Ikhava ekhanyayo ye-High Bay
High Bay Light sesimbembembe
I-Ufo High Bay Light
I-Ufo Led High Bay Light
I-Ufo Led Lights 100w
D New High Bay Ukukhanya
INGABE YIMINYE IMIBUZO NGEMIKHIQIZO YETHU?
Sicela usishiyele umyalezo sizobuyela kuwe ASAP.
Isakhiwo sesihlanu, Isakhiwo 1, No. 233 Haitang Road, Wenzhou Eco & Tech Development Zone, Wenzhou City.
Liper C Series Streetlight Ukuze A Lig Road ...
Uyifaka kanjani i-LED yomgwaqo?
© Copyright - 2020-2021: Wonke Amalungelo Agodliwe. Ukusekela kwezobuchwepheshe: